यस्ता टिप्सहरु फलो गरे गर्दन, ढाड, कम्मरको दुखाईबाट आराम मिल्छ - Tree Media News
यस्ता टिप्सहरु फलो गरे गर्दन, ढाड, कम्मरको दुखाईबाट आराम मिल्छ
tmednewsPosted on १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार
आम नेपालीको राष्ट्रिय रोग ग्यास्ट्रिक भनेझै अचेल गर्दन, ढाड, कम्मर दुखाई पनि सबैको साझा रोग जस्तै भएको छ । उपत्यकाम खुलेका थेरापी सेन्टरहरुबाट पनि हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ कि यो समस्याले हामी कति पीडित भएका रहेछौं ।
यसै बिषयमा ब्याक पेन एक्सपर्ट डा. सुनिल पौडेलले दुखाईबा छुटकारा दिने केही टिप्सहरु फलो गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शरीरको पोजिसन अथवा शारीरिक अवस्थाको ख्याल राख्नुलाई पोश्चुरल केयर भनिन्छ । मेरmदण्ड अर्थात गर्दन, ढाड, कम्मरको दुखाईको उपचारमा यो भन्दा महत्वपूर्ण केहि पनि छैन ।
पोश्चुरल केयरमा ४ वटा कुरा सधैं याद राखौं ।
एक पटकमा १५ मिनट भन्दा बढि नबसौं ।
निहुरिएर वा भुँईमा बसेर काम नगरौं ।
उठिरहेर काम गर्नुभन्दा यता उती हिडेर काम गर्ने गरौं ।
टेबल वर्कमा वा कम्प्युटरमा बस्दा कुन पोजिसनमा बस्ने ? कम्प्युटरको मनिटर कति टाढा हुनुपर्छ ? तपाइले किबोर्ड कहाँनेर राख्ने ? यी सबै चिजमा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ । टेवुलवर्कमा आफुं बसेको कुर्सीलाई टेबलभित्र घुसाइ दिनुपर्छ ताकी हामी निहुरिन नपरोस् । टेवल जति टाढा भयो त्यति निहुरिन पर्ने हुन्छ । काम गर्दाखेरी कुर्सी भित्र घुस्यो भने ढाड सिधा राखेरै काम गर्न सकिन्छ । स–साना जस्तै लागे पनि यि महत्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।
– यदि कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ भने हाम्रो हिप अर्थात् पुट्ठाले कुर्सीको पछाडिको भाग छोएकै हुनुपर्छ तथा यस्माथीको ढाडलाई राम्ररी पछाडि सपोर्ट दिएकै हुनुपर्दछ ।
– कुर्सिमा अगाडि झुक्नुको साटो सिधा बस्नुपर्छ । कुर्सिमा सिधा ९० डिग्रीमा नबसेर अझै अलि पछाडि एक सय बीस डिग्री जतीमा जाँदा मेरुदण्डमा चाप कम हुन्छ । तर त्यसरी बस्दा हिपले कुर्सिको पछाडी धकेलेकै हुनुपर्दछ ।
– उठिरहनु पर्नेले बरु यताउता हिंडडुल गर्ने थोरै बेर बस्ने वा सम्भव छ भने उठिरहँदाखेरी एउटा खुट्टा स्टुलमा राख्ने गर्नुपर्छ ।
– लामो समय बसिरहने वा उठिरहने गर्नु हुंदैन । कामको बिच बिचमा हरेक घण्टामा ब्रेक लिएर ५ वा १० पटक हल्का पछाडि उल्टो झुक्ने वा केहि तन्काउने खाले व्यायाम गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ ।
– सामान उठाउँदा कहिल्यै पनि निहुरिएर नउठाउने तथा यस्को साटो पहिला बस्ने अनि बसेर ढाडलाई सिधा राखेर मात्र सामान समाई उठाउने गर्नुपर्छ । माथिका यी बानीले हाम्रा ७० प्रतिशत ढाडका समस्या हटाउन सकिन्छ ।
– याद राखौं जस्ले पोश्चरको ख्याल राख्दछ उस्लाई मेरुदण्डको समस्या नै हुदैन र जस्ले पोश्चरको ख्याल राख्दैन उस्को रोग अप्रेशन नै गरे पनि ठिक हुँदैन ।
– रोग अनुसारको पोश्चुरल केयर हुन्छन् ।
नियमित ब्यामा गरौं
२. तन्काउने खाले योग वा स्ट्रेचिंग खाले व्यायाम
यदि गर्दन, ढाड, कम्मर सम्वन्धि कुनै समस्या छ भने पहिला विशेषज्ञ कहाँ गएर चेक गराई सल्लाह लिनुपर्छ अनि मात्र सुहाउदो तथा फाइदा दिने ढाडका व्यायाम मात्र गर्ने गर्नुपर्दछ ।
आजभोलिका धेरै मानिसहरुमा भिटामिन डि को कमी छ । जसले गर्दा शरीरमा क्याल्सियम जम्मा हुन सकिरहेको छैन तथा हड्डी कमजोर हुंदै जान्छ वा दुखाई ठिक हुदैन । भिटामिन डि को लागि सबै भन्दा राम्रो घाम ताप्न सकिन्छ । हप्ताको १ घण्टा कपडा खोलेर नांगो छालामा घाम ताप्नु एकदमै राम्रो हुन्छ । भिटामिन डि का औषधिहरु पनि पाइन्छन् ।
४. नियमित चेक जाँच
मान्छेले के सोच्छ भने अलिकती ढाड दुखेको न हो, किन डाक्टरकोमा जाने ? दुई चार दिन पछि आफैं ठिक भइ हाल्छ नि । नसा च्यापिएर भोलि ठुलै समस्या ननिम्तिएसम्म, थला नपरेसम्म डाक्टरकोमा नजाने बानी भएकाले पछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । समस्या जति सानो भयो त्यति त्यसलाई बुझ्न र समाधान गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ । त्यसैले यदि ढाड दुख्न सुरु भयो भने सम्बन्धित विशेषज्ञ कहाँ गएर चेकजाँच गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यदि रोग लागेमा सक्दो चाँडो उपचार गराउन गईहाल्नु पर्छ ।
५. एकिकृत चिकित्सा अर्थात इन्टीग्रेटेड मेडिसिन
गर्दन, ढाड, कम्मर सम्वन्धि समस्याको निम्ती मान्छे घरी यहाँ घरी त्यहाँ धाउदा धाउदा थाकेका छन् । कुनै डाक्टरले दबाई लेख्छ भने कसैले थेरापी गराउंछ । तर जसरी खाना खाँदा भात, दाल, तरकारी, सलाद, दहिको जरुरत पर्दछ । त्यस्तै थेरापीहरुमा पनि एउटा राम्रो सामंजस्य रुपमा कामगर्ने खालको कम्बाइण्ड उपचारहरुको जरुरत पर्छ । यो संयोजन राम्रो भएन भने खानाको संयोजन नमिलेर पखाला लागे जस्तै रोग पनि ठिक नहुने हुन सक्छ । औषधोपचारसंग उपयुक्त खानपिन, व्यायाम तथा केयर अनि घरमै गर्न सकिने उपचारहरु पनि सिक्नु जरुरी हुन्छ ।
सर्वप्रथम विशेषज्ञ कहाँ गएर चेक गराई सल्लाह लिनुपर्छ अनि मात्र सुहाउदो तथा फाइदा दिने खालका उपचारहरुको एकिकृत उपचार लिनुपर्दछ ।
डा. सुनिल पौडेललाई
अर्थाेन्यूरो हेल्थ केयरः लगनखेल वा बागबजार को साथै किर्तिपूरमा पनि भेट्न सकिन्छ ।
Previous Postनयाँ दाउमा ज्ञानेन्द्र शाह, होलान त सफल ?Previous Post
Next Postआयातकर्तालाई मोबाईल बिक्रीमा फिर्ता दिईँदै आएको भ्याट खारेज, कर रकम संकलन गर्ने व्यक्तिले फिर्ता नपाउनेNext Post